Ukufumana amaThuba okuThengisa ngokuZenzekelayo | Martech Zone
Sisebenza nzima ukuzenzekelayo iinkqubo zabaxumi bethu. Njengoko uqala ukucinga ngemizamo yakho yentengiso, ulichitha phi elona xesha lililo? Iinkampani zihlala zinciphisa okanye zithathe kancinci ixesha elithathwayo ukuhamba phakathi kweenkqubo. Thina kuthunyelwe nje malunga nexesha elithathwayo ukurekhoda isikhokelo kunye neendawo zokuchukumisa kwiCRM- kunye nemveliso eyenza lula umsebenzi.
Amathuba kukuba uyayenza le nto imini yonke ngemizamo yakho yokuthengisa, kodwa awuyiqondi loo nto. Nokuba into ilula njengokuthumela iTwitter kubalandeli bakho isenokubonakala ngathi ayothusi… kodwa ukuba ufuna ukufaka ikhonkco kunye nokulandela umkhondo ukuba iTwitter ibuyele kwinkqubo yakho yeAnalytics, inokufuna ukuba ufake iithegi okanye izikhombisi zephulo, mfutshane kwiqela lesithathu Ukunciphisa i-URL, vavanya ikhonkco elifutshane… emva koko uthumele i-tweet.
Oku kuguqule i-tweet yaba ngumzamo. Ukuba uyaliphinda eli xesha lesenzo emva kwexesha, uza kutya ixesha elibalulekileyo. Thatha ixesha uzivavanye ngokwakho. Ngexesha elizayo xa ubhala umxholo, uguqula idatha, okanye uhlalutya iziphumo… phawula amaxesha njengoko usenza amanyathelo. Uya kufumanisa ukuba ukwenza owona msebenzi uthatha okungaphantsi kunotshintsho phakathi.
Olo tshintsho luyigolide kwaye lubonelela ngethuba lokutyala imali kwizicelo zentengiso. Ukubeka ngokulula, ukuthengisa izinto ezenzekelayo kukuvumela ukuba wenze okungakumbi ngezixhobo ezincinci. Kwaye amaxesha amaninzi, ukuthengisa okuzenzekelayo kunokunciphisa umngcipheko wempazamo yomntu! Njengomkhulu URon Popeil ithi, Yibeke, ulibale!
Njengoko ndithanda ukuthi, "Kukho into oyifunayo!"
tags: jquery scrollTopuhlala kwividiyowpengine
IJesubi: Isizukulwane soMfuno esenziwe lula